Unoziva here kuita backlinks mu SEO nenzira yakanakisisa inoita?
Hapana chikonzero chekutaura kuti webmaster yega yega uye mubhizimisi webhizimisi anofanirwa kuziva ruzivo rwekudzokera kumashure muSeO - nekuda kwekufambisa mamwe web traffic, uye pakupedzisira achibatsirwa kubva panzvimbo yepamusoro paSERPs. Asi chii chinoita SEO-friendly friendly backlink profile yewebsite yebhundaneti kana blog? Vakangwarira uye vanoziva kuongorora, kuongorora, nekugadzirisa-kugadzirisa nzira kuitira kuti simba rekutanga re backlink rose rinokosha rive rinodzora zvizere kuti rigare rakagadziriswa pfupi pfupi. Mukutaura kwakajeka, kana kamwe backlink yatanga kukanganisa kukosha kwayo, inofanira kunge inoshandiswa zvakare pakarepo kana kuti yabviswa pakarepo. Saka, sei kuita backlinks mu SEO? Ngatitarisei - iyi inenge iri nzira inopfuurira. Zvakatorwa pachiyero, zvinosanganisira nzira huru dzekugadzirisa chivako uye nguva dzose kugadziriswa nekuongororongedza nguva purogiramu - wohnungen nordhorn privat.
Chii Chinounza Backlink Yakanaka
Pamberi pezvimwe zvinhu, zvose "zvakanaka" backlink (zvisingaiti, zvakasikwa kana zvakasikwa) zvinofanira kubva pamashoko echokwadi chaiwo, blogs , kana chero ipi zvayo inowanikwa muIndaneti. Zvadaro, tsime rebacklink yakanaka inofanira kuva nekwanisi yeP PR (pagerank), DA (chiremera chechiremera), pamwe neAAP (peji peji). Mushure mezvose, munhu wese anokwanisa kubatanidza ne (kana webhusaiti kana bhulogi) anotarisirwa kuti ave nehuwandu hwemashoko ane peji, iyo inopa huwandu chaihwo kuti urarame vashandisi.
Zvakanaka, zvinyorwa zvakadaro zvinofanira kutaura kugamuchira kugoverana mune zvekugarisana. Ndinoreva kuti avo vanonyora zvinyorwa zvakajeka zvekunyorwa kunofanira kudzorerwa zvakare nekuchenjera - zvichida kuti vasazobuda mumakwikwi - mune mamwe maziso anocherechedza uye anodzidzisa, mapepa, infographics, spreadsheets, kana imwe nzira ipi zvayo yekufananidza kuratidza zvinhu zvose zviri nyore uye zvakajeka nenzira. Nenzira, kuisazve zvinyorwa zvako zvepajiji pane chimwe chinhu chinoshandiswa nevashandi-chingavawo chisarudzo chakanaka chewebsite yako kana blog. Saka, kuisa mari nguva nekuedza mukugadzirisa zvishoma zvakanyanya zvakagadzikana, kana zvichida chikamu chakaipisisa chiri chakaoma zvikuru kuverenga uye kubata. Nenzira iyo, pamwe nemamwe shreds emunyanzvi-ane ushamwari uye saka "zviri nyore kudya" zvinogadzirisa haungagoni kungoita zvakanyanya shure, zvikamu, kutaura, kutungamirira uye kubhadhara - asi pfupa mamwe webhuta mushure mezvose.
Nzira dzekutevedza sei backlinks mu SEO
kuvimba nesangano rakagadzirirwa kuvaka hurongwa;
edza kushandiswa kwechiitiko chakanakisisa mukutengesa kwema digital;
vanogara vachiongorora hurongwa hwekutarisa backlinks yako - zvose zvehuwandu uye hunoenderana nehuwandu hwomunhu;
nyora zviitiko zvevaeni kana zvigwaro zvebhuku kuitira kuti zvive zvichinyorwa pane zvimwe zviremera zvemazuva matatu;
inosangana nemapuraneti akawanda anonyanya kuzivikanwa kana mabloggi, ayo anofanira kunge akakodzera zvakakwana pamusoro webhizimisi yako huru, marusi niche, kana kuti pamwe pamwe pamwe nemabhizimusi.
Pakati pezvimwe zvakasiyana-siyana zvekutsvakurudza kwemashure uye mashandisirwo emashandisi, ndakaedza Semalt Analyzer (Semalt), Open Site Explorer (Moz), uye Majestic SEO toolkit pane yangu ichangobva kutanga ecommerce webshop. Mushure mezvose, zvinongova kwamuri kuti musarudze maitiro ekuita backlinks mu SEO, uye iyo inowanikwa paIndaneti kuedza kutanga. Pakupedzisira, usakanganwa kuti hutano hwako huchangobva kusikwa hunogona kuonekwa kunge husina maturo zvachose. Zvechokwadi, wakapiwa kuti uri kuenda kune imwe webhusaiti kana bhulogi, iyo inonyanya kusimba maererano neSeO metrics pane yako imwe.